अब केही गर्नुपर्छ भन्ने आशा पलाएको छ : श्वेता खड्का - Arghakhanchi Saptahik
दादा ( श्रीकृष्ण श्रेष्ठ) ठूलो बिरामी भएको थाहा पाएर मैले उहाँसँग विवाह गरेको होइन । तर, उति बेला मिडियामा यही विषयलाई लिएर धेरै चर्चा गरियो । चलचित्र ‘कोहिनुर’को छायांकनअगाडि मात्रै उहाँसँग मेरो भेटघाट भएको
हो । करिब तीनचार महिना अघिदेखि नै उहाँलाई सामान्य खोकी लाग्न सुरु भएको थियो ।
विवाहको दिनमै पार्टी भएकाले हामीलाई धेरै नै दौडधुप पनि भयो । सायद, यही थकानका कारण उहाँलाई खोकी लागेको लाग्यै गर्‍यो । यसैले पनि परिवारका सदस्यले हामीलाई एकै छिन पनि छाड्नुभएको थिएन । बेलाबेला दादालाई तातो पानी
खान दिएर आराम गर्न लगाइरहेका थियौं ।
दादाले पहिलेदेखि नै दिल्लीमा चेकअप गराइरहनुभएको थियो । त्यसैले परिवारको सल्लाहमा पुरानै डाक्टरसँग चेकअप गराउन दिल्ली लैजाने निर्णय भयो ।
विवाहको तेस्रो दिन हामी दिल्लीस्थित गंगाराम अस्पताल पुग्यौं । त्यहाँ नौ
दिनसम्म आईसीयूमा राखेर क्याबिनमा सारिएको थियो । लगातार तीन सातासम्म उपचार गराउँदा पनि डाक्टरले कहिले कोल्ड एलर्जी त कहिले निमोनिया भन्थे ।
कुनै कुनै क्यान्सर अन्तिम अवस्थामा मात्रै थाहा हुने रहेछ । बायोप्सी टेस्टबाट बल्ल उहाँलाई फोक्सोको क्यान्सर लागेको भन्ने पत्ता लाग्यो । परिवारले पहिले त मलाई केही भनेको थिएन । तर, पछि दाइले बच्चालाई सम्झाएझैं
सम्झाउँदै मलाई सबै कुरा भन्नुभयो । त्यो सुनेर म बेहोश भएँ । करिब चार घन्टापछि मात्रै होश आएर रुन थाल्दा दाइले रुन दिनुभएन । तिमी रोयौ भने भाइ
झन् आत्तिन्छ र उसको उपचारमा गाह्रो हुन्छ भनेर दाइले भन्नुभयो । दाइ भन्नुहुन्थ्यो- हामीले उसलाई केही पनि भएको छैनजसरी सामान्य रूपमै व्यवहार गर्नुपर्छ ।
केही समयपछाडि ‘भाइले तिमीलाई भेट्न खोजेको छ’ भन्दै दाइले आईसीयूमा बोलाउनुभयो । तर, त्यहाँ नहुनुपर्ने घटना घटिसकेको रहेछ । त्यसपछि के भयो ?
म नेपालसम्म कसरी आइपुगेँ ? केही सम्झना छैन ।
आफूलाई क्यान्सर भएको छ भन्ने जानकारी दादालाई नदिने मेरै योजना थियो । परिवारको साथ पाएर उहाँलाई अन्तिमसम्म पनि यो कुरा बताइएन । ‘मलाई कम त हुनुपर्ने, किन के भएको भन्नु न’ भनेर उहाँले डाक्टरहरूलाई धेरैपटक सोध्नुभयो । तर, हामीले नबताउनू भनेकाले डाक्टरले पनि भन्नुभएन । रोग पत्ता
लागेपछि डाक्टरले राजीव गान्धी क्यान्सर अस्पतालमा उपचारका लागि लैजाने सल्लाह दिएका थिए । तर, हामीले उहाँलाई मनोवैज्ञानिक असर पर्छ भनेर बरु उताका डाक्टर यता बोलाएरै उपचार गरायौं, राजीव गान्धी क्यान्सर अस्पतालमा लगेनौं ।
उहाँको उपचारमा हामीले कुनै कमी गरेनौं । उहाँले दुख्यो भनेको म सहन सक्दिनथिएँ । त्यसैले उहाँलाई नदुख्ने र गाह्रो नहुने सर्तमा जति पैसा खर्च
भए पनि औषधि दिनुस् भनेर डाक्टरलाई भनेँ । र, करिब एक लाख ३० हजार रुपैयाँ
पर्नेसम्मको एउटै इन्जेक्सन दिइयो । तर, धेरै महिनासम्मको खोकाइ र बढी औषधि सेवनले उहाँको शरीर निकै कमजोर भइसकेको थियो । सायद यसैले, दोस्रो किमो अलि कडा भएकाले उहाँको शरीरले सहन सकेन । दिउँसो ३ बजेतिर किमो दिएको,
राति उहाँले संसार छोड्नुभो ।
स्वास्थ्यप्रति उहाँ निकै सचेत हुनुहुन्थ्यो । प्रत्येक वर्ष भारत गएर नियमित रूपमा एकपटक सम्पूर्ण शरीरको चेकअप गराउने उहाँको बानी थियो । लामो समयसम्म नखाई नखाई सुटिङमा व्यस्त हुने बानीले उहाँको ग्यास्ट्रिक बिग्रिएर
पेटमा अप्रेसन गरिएको रहेछ । त्योभन्दा बढी त केही भएकै थिएन । रोग पत्ता लगाउनै हामीलाई धेरै समय लागेको थियो ।
पशुपतिमा भएको एउटा कार्यक्रममा मनीषा कोइराला र म सँगै थियौं । पेट दुख्यो
भनेर नर्भिकमा उपचार गराउन जाँदा मनीषा दिदीलाई क्यान्सर भएको पत्ता लागेको थियो । खबर सुनेर मलाई धेरै दुःख लाग्यो । गौशालाको एउटा पार्लरमा काम गर्ने दिदीको छोराको नाकबाट रगत आयो रे । जँचाउन लैजाँदा थाहा भयो- रक्त क्यान्सर भएको रहेछ । उहाँलाई राजीव गान्धी अस्पतालमा लगेर उपचार गरेपछि अहिले निको भएको छ ।
दादाले अन्तिम समयसम्म यो रोगसँग लड्ने धेरै प्रयास गर्नुभयो । चलचित्र ‘कोहिनुर’को रिलिज मिति पहिले नै तय भएअनुसार साउन २३ गते रिलिज गरियो । उहाँले अस्पतालबाटै म उपचारमा छु भन्ने भ्वाइस बाइट पनि पठाइदिनुभएको थियो ।
साँझ चलचित्र कस्तो चल्यो भनेर निर्देशक र हलवालाहरूसँग रिपोर्ट मागिरहनुभएको थियो । चलचित्र राम्रो चलेको सुनेपछि निकै उत्साहित पनि हुनुभएको थियो । आफ्नै ब्यानर नेपा मुभिज प्रालिबाट अझै धेरै चलचित्र बनाउनुपर्छ भन्ने सल्लाह गर्नुहुन्थ्यो ।
घटना हुनु एक दिनअघि उहाँले ‘भोलि मलाई केही भइहाले तिमी जिन्दगीमा धेरै
खुसी हुनु, हिम्मत लिएर अगाडि बढ्नु’ भनेर जिस्कनुभएको थियो । ‘मेरो आत्माले तिमीलाई सधैं हेरिरहनेछ, तिम्रो हरेक दुःखमा साथ दिनेछु’ भनेर उहाँले भनेपछि म उहाँको मुठी समातेर धेरै रोएको थिएँ । मैले ‘यस्तो कुरा नगर्नुस्, तपाईंलाई सन्चो हुन्छ’ भनेको थिएँ । त्यस बेला उहाँले ‘खोइ त नि तिम्रो डाक्टरले के भएको भनेर भन्दै भन्दैन’ भन्नुभएको थियो । ‘म तिमीसँग कति कुरा गर्न चाहन्छु तर तिमी रोइरहन्छौ’ भन्नुहुन्थ्यो ।
जे भए पनि विधिको विधानलाई स्वीकार्नैपर्ने रहेछ । म धेरै तनावमा गइसकेको थिएँ । यहाँसम्म कि मलाई अरूले नै नुहाइदिनुपर्ने भइसकेको थियो । एक हिसाबमा म पनि मरिसकेको थिएँ । धेरैजनाको परामर्शपछि मलाई ‘जीवन छ’ भन्ने लागेको छ । अब केही गर्नुपर्छ भनेर आशा पलाएको छ र यो ठाउँसम्म आइपुगेकी छु । चाँडै नै नयाँ चलचित्र सुरु गर्ने सोच बनाएको छु । दादालाई कुनै पनि हिसाबमा चोट पुग्ने काम म गर्दिनँ । उहाँको सपना र इच्छालाई साकार
पार्ने बाटोमा अगाडि बढिरहन्छु ।